१६ कात्तिकमा शिवम सिमेन्ट्सले बोलायो साभारणसभा, लाभांश कति ? « अर्थबजार – आर्थिक विकासको लागि सञ्चार
१६ कात्तिकमा शिवम सिमेन्ट्सले बोलायो साभारणसभा, लाभांश कति ?
२४ आश्विन २०७८, आईतवार १०:५९
काठमाडौं । शिवम सिमेन्ट्सले गत आर्थिक २०७७/०७८ वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई वितरण गर्ने घोषणा गरेको नगद लाभांश पारित गर्न साधारणसभा बोलाएको छ। कम्पनीले १६ कात्तिकमा होटल सोल्टी काठमाडौंमा बिहान १० बजे छैटौँ वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको हो।
कोरोना भाइरसका कारण सभा भर्चुअल माध्यमबाट पनि सञ्चालन हुनेछ । सभाले हाल कायम चुक्ता पुँजीको २९ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब २७ करोड ६० लाख रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । शिवमले दिन लागेको यो हालसम्मकै धेरै लाभांश हो ।
गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले सेयरधनीलाई २४ दशमलव २१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । सभामा सोही आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सान, नगद प्रवाहमा पनि छलफल गर्नेलगायतको एजेन्डा छ ।
कोभिड १९ महामारीको जोखिमका कारण साधारण सभामा सहभागि हुन इच्छुक शेयरधनीहरूलाई कम्पनीले भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत जुम आईडी र पासकोड उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । साधारणसभा तथा लाभांश प्रयोजनार्थ कम्पनीले ८ कात्तिकमा बुक क्लोज गर्ने जनाएको छ । यसर्थ, ७ कात्तिकसम्म नेप्सेमा कायम सेयरधनीले मात्रै लाभांश पाउनेछन् ।
# लाभांश # शिवम सिमेन्ट्स # साभारणसभा
प्रकाशित : २४ आश्विन २०७८, आईतवार १०:५९